Hal-abuurka usbuuca: Naara Riveiro wuxuu soo bandhigayaa Alaabtiisa Paper | Abuurista khadka tooska ah
Naara waa aasaasihii Scribble Qaylo-dhaan, shirkad u heellan adduunka naqshadeynta garaafka iyo horumarinta wax soo saarka ugu hal abuurka badan. Isaga iyo Daanyeel, wuxuu bilaabay inuu abuuro alaabta carruurtu ku ciyaaraan ee madadaalo noocyada dabaaldegyada iyo munaasabadaha gaarka ah. Asalka, majaajillada iyo dabacsanaanta dabeecadda leh oo ay weheliso cunno macaan iyo tayo ayaa u keentay macaamiil aad u tiro badan waxayna noqdeen kuwa wax tusaaleeya xilliyada gaarka ah ee dadka qaarkood.
Marka xigta, waxaan la sheekaysan doonnaa xoogaa si ay nooga sheegto waxaas oo dhan si qoto dheer:
Subax wanaagsan Naara! bilowga noo sheeg maxaad qabataa
Waxaan inta badan u heellan yahay qaabeynta qalabka xafiisyada gaarka loo leeyahay. Anigu had iyo jeer waxaan ahaa qof aad u jecel filim iyo jacayl, sidaa darteed waxaan u arkaa wax aad u fudud inaan isku xiro fikradaha aan macquul ahayn si aan u abuuro wax xiiso leh iyo xitaa isku xirnaan mararka qaarkood. Sidoo kale waxaan ahay sawirqaade sidaa darteed saacado ayaan ku qaadan karaa sawirada haddii natiijadu noqon doonto mid xiiso leh oo lala yaabo.
Sidee bay hal-abuurkaagu u bilaabmay?
Waxaan helay buug waraaqo ah oo ku saabsan 6 sano ka hor waxaan bilaabay inaan la ciyaaro sheybaarada cd-ga. Maaddaama aan ahay naqshadeeye garaaf ah oo aan haysto barnaamijyada tifaftirka, waxaan ugu habeeyay sawirradayda saaxiibbaday. Maalin maalmaha ka mid ah waxaan saaxiibo qaar siiyay waraaqo yar oo arooskooda ah waxaanan ku dhajiyay baloog (aad iyo aad ayaan uga xishoonayaa jidka). Waxaan bilaabay inaan ka helo fariimaha dadka iyaguna raba waraaqadooda arooskooda. Waxa kale oo dhacday inaan immika shaqo la’aan noqday, markaa waxaan haystay wakhti aan ku tijaabiyo oo aan ku tijaabiyo nashqado kala duwan.
Halkee ayuu ka yimid fikradda waraaqaha ah?
Sidii aan idhi, anigu waxaan ahay filim sameeye aad iyo aad ayaan u jeclaa hadiyado aan si gaar ah u siinayo asxaabteyda, sida ku xusan hiwaayadooda, waxyaabaha ay jeclaan lahaayeen inay qabtaan, shaqooyinka, dabaaldegyada gaarka ah, waxyaalahan oo kale micnaheedu waa ama karti, ama midkoodna. Dhageystayaal ubaahan Umpalumpa si ay uga caawiyaan inay layaabaan asxaabtooda iyo qoyskooda. Oo waxaan helay fikradda ah abuurista caruusadaha waraaqaha ah ee dadka dhabta ah sida haddii ay yihiin alaabta carruurtu ku ciyaarto, iyagoo wata baakidhkooda iyo wax walba. Marka waxaan qaabeeyay qaar noocyo ah oo u adeegi lahaa saldhig iyo baakad waxaanan bilaabay inaan ka buuqno baraha bulshada.
Maxaad si sax ah uga qabataa Rapture Garabato?
Waxaan daryeelaa facebook iyo boggaga qaarkood ee aan ku xayeysiino. Shaqadaydu waa la macaamilka macaamiisha si aan u ogaado waxa ay rabaan inay gudbiyaan iyo fikradaha ay jeclaan lahaayeen inay qabtaan. Waxaan qaabeeyaa "sawirrada" sawirka vektorka, ka dibna inta kale ee cunsurrada ah (dharka iyo walxaha la codsaday) si aan u dhammaystiro setka. Iyo ugu dambayntii baakadaha, oo aan waliba shakhsiyeynay. Waxaan tegayaa daabacaad, ururin iyo diyaarin wax kasta si aan ugu diro macmiilka.
Sidee ayuu isticmaale uheli karaa abuurkaaga oo uu uga dalban karaa Arrebato Garabato?
Waqtigan xaadirka ah farriimaha gaarka ah ee facebook, twitter, weddings.net iyo foom ku meel gaar ah oo ku yaal boggayaga. (Shabakadu waa shey aan sugeyno, waxoogaa madax ah ayeyna noo keenaysaa. Laakiin waxaan rajeyneynaa inaan dhowaan diyaar u noqono)
Mudo intee le'eg ayuu hawsha abuurku qaadataa?
Lammaane, iyada oo aan lahayn qalab dheeri ah marka laga reebo bouquet (marka laga hadlayo aroosyada) laga bilaabo 4 illaa 6 saacadood. Inta udhaxeysa naqshadeynta iyo isku imaatinka. Annaga oo aan xisaabineynin xaqiiqda ah in naqshada wejiyada, aan kala tashanno macmiilka, oo ay jiraan maalmo kooban oo la soo diro oo wax laga beddelo. Markay wajiyadu hagaagsan yihiin, waxaan sii wadnaa waxyaabaha intiisa kale.
Qalab noocee ah ayaad badanaa ku isticmaashaa alaabtaada?
Badanaa warqad iyo kartoon. Si loo "labisto" qaybo ka mid ah, gaar ahaan lamaanayaasha arooska, waraaqo gaar ah oo la soo dhoofiyay, oo aan ka iibsanno dukaamo gaar ah oo ku yaal Barcelona. Waxaan sidoo kale ku qurxinnaa set-ka agabyada duugga ah marka nashqaddu u baahato. Daabacaaddu waa dijitaal sidaa darteed midabku uu u eg yahay mid aan xad lahayn.
Bilaabida ganacsi kuu gaar ah oo la xiriira adduunka naqshadeynta garaafka waqtiyadan waxay noqon kartaa caqabad. Maxaad talo siineysaa dhammaan kuwa ka fikiraya sameynta fikrad si madax-bannaan?
Dhibaatooyinka berrito, aniga ayaa daryeeli doona berrito, maanta waxaan xalliyey ta maanta. Isaga oo sii hadlaya ayuu yidhi waa inaad diirada saartaa waxyaabaha togan ee shaqo maalmeedka. Lacagtu waa lama huraan waana lagama maarmaan inay shirkaddu shaqeyso, laakiin waa inaan laga fikirin wax badan oo ku saabsan, kaliya ku filan oo lagama maarmaan ah. Haddii kale, ma seexan doontid mana raaxeysanaysid naftaada. Muhiim! : Leedahay asxaab xirfad ahaan, hana ka baqin inaad dibedda wax ka bixiso ama caawimaad weydiisato. Waxaa laga yaabaa inaad lacag yar kasban doontid laakiin habkaas kama aad tagi doontid macmiil kasta oo jiifa, iyo jawaab celinta shirkadaha kale waxay soo saartaa sumcad, taasoo soo saarta macaamiil badan.
Iyada oo ku saleysan khibradaada khibraddan, miyaad u maleyneysaa inay jiraan waxyaabo aasaasi ah oo caqabadda la kulmaya?
Shakhsiyan, waxaan u maleynayaa in caqabadaha ay wajahayaan si ka wanaagsan ama ka xun, taas oo kuxiran tayada midkasta. Ku kobci dulqaad, dhammaan wixii ka sarreeya, oo noqo mid wanaagsan. Waa in aynaan u ogolaan nafteena in laga adkaado niyad jab iyo in aan ka kacno dhulka markasta oo aan dhacno.
Maxay yihiin khaladaadka ay tahay inuu ganacsade hal abuur leh iska ilaaliyo?
Waxaan u maleynayaa inay si sax ah u tahay wax iska soo horjeeda. Waa inaad qalad sameysaa maxaa yeelay waa sida kaliya ee wax lagu baran karo. Uma baahnid inaad ka baqdid inaad wax xalliso oo waa inaad u diyaar garowdaa, sida qof u qaata xirmada xaaladaha degdegga ah ee socdaalka. Weydiinta qof aad ku kalsoon tahay oo khibrad u leh, sida loo xalliyo xaaladaha qallafsan ama khaladaadku kugu kallifaan waxay kaa dhigaysaa inaad isku diyaariso markii aad adigu samaysato.
Boombalooyinkaagu waxay xiiseynayaan inay yiraahdaan ugu yaraan, door intee le'eg ayay hal-abuurnimadu ku leedahay Rapture Garabato?
Waa muhiim, waxaan isku dayeynaa inaan wax ku cusbooneysiino golaha guud ahaan, waxaan raadineynaa qaabab aan waqtiga ku badbaadinno oo aan ugu adeegi karno macaamiil badan. Goynta muqaawamada, tusaale ahaan, ama mashiinka naqshadeynta 3D… albaabada ayey ufuraan alaabada cusub. Ma dooneyno inaan caajis noqono waana inaan wax cusub abuurnaa. Hada waxaan baareynaa oo aan u kuur galeynaa natiijooyinka.
Maxaa shaambaddaada kaga duwan kuwa kale ee xirfadlayaasha ah isla qaybtaas?
Ma xadidayno mala-awaalka macaamiisha. Waxaan leenahay qiimayaal go'an sidaa darteed waxay isku qiimo yihiin lammaanaha fudud, marka loo eego lamaanaha leh saddex eey, ilmo yar oo ku jira gawaaridooda, gitaarka iyo miiska fiisiyoteriga. Caadi ahaan waa inaan si gooni ah ucaawino waxyaalaha dheeriga ah, sida kuwa kaleba yeelaan, maxaa yeelay waxay ku lug leeyihiin saacado badan oo shaqo iyo isku imaatin ah, laakiin hadda waxaan doorbidnay in natiijada layaab ku keento macmiilka iyo qalabkuba ay muhiim u yihiin qarashka shucuurta darteed
Noo sheeg sedex eray oo qeexaya waxaad qabato.
Naqshadeynta, rogid wanaagsan iyo qabow.
Waa maxay mashaariicda aad maanka ku haysaa? Hadafyo fog-fog?
Gaadho dhagaystayaasha carruurta. Waxaa jira wax halkaas jooga oo la xiriira caruusadaha dharka iyo muusikada.
Laga bilaabo halkan waxaan kuu rajeyneynaa nasiib wacan mashruucaaga waxaanan kuugu hanbalyeynaynaa sida hal-abuurka leh, xiisaha leh iyo shaqada qabow;) Nasiib wacan qof walba! Adiguba waad ogtahay inaad kaheli karto fanaaniintan shabakadooda jihadaas. Fiiri maxaa yeelay wax qashin ah ma leh!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Fanaaniin » Hal-abuurka usbuuca: Naara Riveiro waxay soo bandhigeysaa Alaabaheeda Paper